Kubuntu sy Xubuntu, vokatra roa nohatsaraina sy atolotra | Avy amin'ny Linux
Manana zavatra mazava be aho: nanomboka Kubuntu y Xubuntu sendra notanan'i fiaraha-monina, lasa fizarana tena tsara izy ireo.
Lojika ilay dingana. kanônika, tarihin'ny PDG tao anaty aloka dia nanana tanjona mazava be foana izy ary tsy misy ifandraisany amin'ny fanaovana ireo variants ireo, zavatra tsara kokoa, noho izany, ny zavatra tsara indrindra dia ny nanaterana azy fiaraha-monina amin'ireo mpampiasa izay manampy azy ireo amin'ny fotodrafitrasa ilaina hampiantrano ny trano fitahirizana, isos, sns ...
Lavitra ny miharatsy Kubuntu y Xubuntu Hain'izy ireo ny mitohy amin'ny loko manidina, nateraka indray toy ny Phoenix izy ireo. Ireo fizarana roa ireo dia tsy vitan'ny nahazo kalitao ihany, fa ny fitoniana, ny fahombiazany, ny hatsarany ary izany dia hita amin'ny kinova farany misy raha nanana fotoana nampitahana azy ireo tamin'ny teo aloha izahay.
Omaly aho nametraka fizarana roa tao VirtualBox ary tena afa-po aho.
De Xubuntu Tsy dia manana anjara firy aho satria fantatry ny rehetra tato ho ato KDE dia mipetraka eo amin'ny latabatro Fitsapana i Debian, fa amin'ny fitsapana dia nataoko roa LiveCD toy ny Virtualbox, namela tsiro mahafinaritra teo am-bavako izy ireo.
Ny Vondrom-piarahamonina izay ao ambadik'ity variant ity dia nitandrina tamin'ny fiasa tamin'ny antsipiriany rehetra, indrindra ny kanto ary ny vokatra dia ankasitrahana. Xfce 4.10 tonga ara-potoana mba hanatsarana ny traikefa amin'ny Xubuntu, Ary raha zavatra "maivana" ho an'ny solosaintsika no tadiavintsika dia tsy maninona ny manandrana azy, raha mbola tsy mitaky be loatra amin'ireo fampiasa isika.
Ho azy Kubuntu Tonga ao amintsika amin'ny iso izay milanja mihoatra ny 900MB, manao fanatanjahan-tena vaovao KDE 4.9 izay mampiseho ny fanatsarana ny asany. Raha nanontany ahy momba ny fizarana izy ireo taloha mpomba ny KDE hampiasaina, tsy isalasalana fa ho noresahiko Chakra u openSUSE, fa amin'izao fotoana izao dia afaka mampiditra tsy misy fisalasalana aho Kubuntu na dia ny ahy aza Debian tsy ratsy koa.
Kubuntu taona lasa izay dia nahazo ny anaram-boninahitra iray amin'ny fizarana ratsy indrindra mpomba ny KDE Tsy natao ho an'ny kely kokoa izany. Azo antoka, ny fiovana KDE 3.X amin'ny kinova 4.X Misy fiantraikany kely ihany koa aho, fa ny lasa, ny lasa.
Raha fintinina, na eo aza ny fitarihana ny tovana "Ubuntu" amin'ny anaran'izy ireo, heveriko fa ireo fizarana ireo isan'andro dia mifindra lavitra ny akanim-borona nahita azy ireo foy (Canonical) ary rehefa mihalehibe izy ireo dia diovina amin'ny zava-misy azo tsapain-tanana ny lazany fa tsy amin'ny teny fotsiny. +1 ho azy roa ... 😉
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fisehoana / personalization » Kubuntu sy Xubuntu, vokatra roa nohatsaraina sy natolotra
Androany nametraka Xubuntu 12.10 aho ary tsara. Raha ny marina dia nametraka Ubuntu 12.10 aho ary miadana tsy mitongilana izy, taorian'ny 90 minitra dia nesoriko izy ary napetrako Xubuntu 64bit. Nametraka ny tombontsoa nVidia, Chrome ary Spotify ary tantely momba ny zava-drehetra aho, 306Mb RAM no misy, manana 4Gb aho, ary mandeha haingana be ny zava-drehetra. Fahasamihafana inona !! Heveriko fa hisy ny distro Xfce voamarina kokoa, saingy tsy tiako ny manao fantson-drano raha tsy tiako izany. Ary tianay izany bebe kokoa na latsaka, dia tsy maintsy ekena fa miaraka amin'ny "seho ubuntu" manana ny repository sy ny tutorial efa voavaha dia tena ahazoana aina.
ny masinina dia ity:
raha te hahita ny volako ianao, heh heh.
Lahatsoratra tena tsara. Heveriko fa ny lalana narahin'i Canonical dia azo iadian-kevitra. (Na dia hisy olona mahazo aina amin'ny Ubuntu aza)
Ary raha nandresy ny famotsorana ny vondrom-piarahamonin'ireo distro roa ireo dia tongasoa.
Ny ankamaroan'ny tranga fantatro momba ny olona izay nifindra tamin'ny Linux (ao anatin'izany ny ahy) dia nandalo Ubuntu tamin'ny fotoana iray ary avy eo nanisy marika marobe ho an'ny hafa izahay. Ankehitriny, ho an'ity karazan'olona ity dia hisy safidy bebe kokoa, ary koa, na dia sarotra ho an'ny sasany aza ny mamantatra azy, ny tovana -ubuntu dia mahatonga ny zavatra ho mora ho an'ny olona izay manomboka amin'ity tontolo midadasika ity dia ny Linux miaraka amina fizarana an-tapitrisany maro hisafidianana.
Ka averiko indray, tongasoa ireto fanatsarana ireto.
Raha ny tokony ho izy, elav, raha ny fampisehoana (vao napetraka vao haingana), misy zavatra tian'ireo distros ireo ohatra, Debian + XFCE na KDE? Sa noho ny kanto kokoa sy noho ny mora omena azy ireo? Mazava ho azy fa ny fahafantarana fa amin'ny fizarana fizarana dia azo hatsaraina tsara raha fantatrao hoe ahoana.
Fiarahabana! Ary arahabaina ao amin'ny lahatsoratra
"Raha ny tokony ho izy, elav, amin'ny resaka fampisehoana (vao napetraka), misy zavatra tian'ireo distros ireo ohatra, Debian + XFCE na KDE?"
Fantatro fa tsy elav aho, satria mbola tsy sola aho ary tsy mihaino ny famerenako indray (any tiako ny miady hevitra momba ny mozika hahaha) ary tsy dia manana fahalalana firy amin'ny resaka solosaina aho fa raha afaka maneho hevitra momba ny zavatra mitranga ao amin'ny kahie misy anontanianao:
Debian Testing miampy XFCE 4.8 fanjifana amin'ny startup 135mb, miova izany rehefa mampiasa mpamily tompona ati izay nadika ho 100mb kokoa rehefa miakatra miaraka amin'izay mijanona ao amin'ny 235mb, tsy fantatro izay ho alehany fa toa mihinana mihoatra ny maimaimpoana ilay mpamily fananana.
Xubuntu 12.10 + xfce 4.10 fanjifana rehefa mandefa latsaky ny 265mb sy manova ny mpamily manodidina ny 330mb, kely kokoa noho izany ny fanjifana nomena ahy.
Azoko lazaina aminao izao fa ny xubuntu dia tsy maivana tanteraka ary mirona amin'ny programa sasany, ohatra, manintona ahy in-droa aho raha manana birao misokatra mampiasa tabilao, birao fandefasana maimaimpoana 3.65, ankehitriny amin'ny debian dia tsy mahazo ahy izany izany ihany no hany zavatra nahatezitra ahy kely dia ny tsy fahazoana manavao xfce 4.8 avy amin'ny paositra ofisialy, fa izao dia efa niasa efa ho telo herinandro aho ary hamela azy herinandro iray hafa hamita ny fitsapana nataoko, nanadino aho ary ny tena manan-danja indrindra ho an'ny Ny fiainako bateria amin'ny debian miampy 5 ora ary mbola tsy mihoatra ny adiny 3 ny xubuntu, izany no arahabaina
Ny olana amin'ny Xubuntu dia ny famoahana andian-daemon / fangatahana hahatonga ny Xfce ho mpinamana amin'ny farany… Izay no mahasamihafa an'i Xubuntu sy Debian amin'i Xfce. Ny Xfce miaraka amin'i Debian dia nanomboka ahy (miaraka amin'ny RAM 1GB) miaraka amin'ny 67MB.
67 mb heveriko fa satria manana karatra nvidia ianao ?? satria fantatro fa iray ny mpamily ati! »$» hehehe arahaba elav.
Mbola tsy nampiasa NVidia na ATI mihitsy aho, efa nampiditra Intel foana 😉
Manana ATI daholo aho. ATI taloha fa ATI. Ary ny LinuxMint miaraka amin'ny XFCE dia miakatra mihoatra ny 120MB. Ary izany dia satria napetrako ao ny menio Mint. Ny iray hafa izay havoakako any dia manana nVidia ary nametraka ny Xubuntu farany teo aho, ny fampiasana RAM dia ambany 130MB.
Zahao hoe inona ireo entana ao amin'ny startup. Azo inoana fa manana zavatra tsy ilainao efa enta-mavesatra ianao. Ohatra, mampiasa Bluetooth isan'andro sy matetika ve ianao? Tsia? Aza araraotina avy eo. Zavatra toa izany.
Ny hany zavatra "nahantona" tamiko dia Pidgin, izay noho ny antony dia nampiasa CPU be loatra. Vahaolana: nanao script aho ary nametra ny fampiasana CPU ho 20%. Ankehitriny tsy mihantona mihintsy.
Kubuntu tsy haiko fa fipoahana i Xubuntu. Nanomboka nampiasa azy io aho rehefa tonga tao Ubuntu ny Unity ary tsy nandao ny PC izany intsony. Ny zavatra tsy dia tiako loatra dia ny bika aman'endriny, fa hey, azonao atao ny manova ny lohahevitra.
Raha manana ny Xubuntu farany ianao (na ny iray izay nasianao XFCE 4.10) dia azonao atao ny mametraka ny MintMenu ary mihatsara kely kokoa ilay lafiny. Ka manana milina miaraka amin'i Xubuntu aho.
Niaraka tamin'i Kubuntu nandritra ny roa volana aho izao ary ny tena marina dia mandeha tsara izany. Te handao ny Ubuntu aho satria tsy tiako intsony ny Unity, ka nanomboka tamin'ny LMDE aho, saingy vetivety dia reraka aho ary misy zavatra kely tsy mandeha tsara ary nanomboka nanandrana fizarana fizarana niaraka tamin'ny KDE aho. Nanomboka tamin'ny OpenSuse aho, avy eo Chakra sy ny sasany hafa, saingy teo amin'izy rehetra dia nanana olana tamin'ny feo aho. Ampidiro ny Kubuntu ary vita indray mandeha izany.
Nozaraiko tamin'i Elav ny fanehoan'ireto karazany roa an'ny * fianakaviana untu ireto satria heveriko fa tsy nivadika tamin'ny tontolo iainany (XFCE sy KDE) izy ireo. Heveriko fa izy roa dia ampahany amin'ny disro tsara indrindra eo ambanin'ny birao misy anao satria XFCE dia mameno ny zavatra antenaina ary ny KDE (na dia tsy mpampiasa an'ity tontolo ity aza aho) dia nahavita asa tena tsara.
Raha izaho manokana dia ampiako ihany koa ny Lubuntu, ny variant miaraka amin'ny LXDE satria, toa ny XFCE, dia manome safidy hafa madio sy maivana ary tsotra izy ireo, fampiharana marobe, trano fitahirizana ary tsy misy fahasarotana tsy ilaina.
Hatramin'izao dia nanana ny famandrihako tamin'ny kinova Ubuntu aho satria tsy tiako ny fisafidianana fonosana default ary aleoko ny LMDE, saingy heveriko fa tonga ny fotoana hifindrana amin'ny zavatra hafa mba tsy hijanona. Nieritreritra ny fanandramana SolusOS na Debian niaraka tamin'ny KDE aho, fa raha tena milamina ary vita tsara i Kubuntu amin'izao dia angamba hanandrana aho (ny fianteherana amin'ny QT dia hanome ahy fialan-tsiny lehibe hametrahana ny iray amin'ireo mpitantana rakitra tiako indrindra: Krusader)
Ho an'i Elav dia hoy izy:
Misy lohahevitra maromaro izay tena mitovy amin'ny iray hafa, heveriko fa efa mirona hiverimberina izy ireo.
Heveriko fa tsy mila tadidiko fa bilaogy ity ary raha fantatry ny mpampiasa mitsidika anay ny hevitra sy ny filozofia ao ambadik'io teny io (bilaogy, bilaogy), dia ho fantatr'izy ireo fa tsy misy ferana ny zavatra navoaka, raha mbola misy ifandraisany amin'ny GNU / Linux.
Ny hany zavatra tsy ananan'i Kubuntu dia lohahevitra tsara iray izay mahatonga azy hahatsapa ho toy ny fizarana azy manokana, ho an'ny tsiriko ny endriny dia tena generic vao avy napetraka, ary tsy tiako mihitsy ilay sary an-tsary.
+1 Heveriko fa izany no tsy ampy indrindra amin'ny kubuntu amin'izao fotoana izao.
Ignacio Monge dia hoy izy:
Mieritreritra aho fa afaka miantehitra amin'ny Macer i Kubuntu noho ny lohahevitra, toa ny efa nataon'i Chakra, ary mamorona zavatra manokana ho an'ity distro ity.
Valiny ho an'i Ignacio Monge
Macer? Ilay namorona ny lohahevitra Dharma?
Moa ve i Malcer mampiasa chakra xD
kvothe dia hoy izy:
Manaiky tanteraka, tsy misy lohahevitra sy sary mivoaka manome azy ny toetra, na dia ovaintsika aza izy ireo aorian'ny 5 minitra.
Mamaly an'i kvothe
Dorian dia hoy izy:
Tena miombon-kevitra aminao aho!
Raha ny tena izy, raha ny fahitako azy dia tokony hitovy ny fijery sy ny fahatsapana an'ireo fizarana rehetra avy amin'ny Ubuntu ka hatramin'ny Lubuntu ka araka ny voalaza teo aloha dia tsapan'izy ireo fa fizarana "rahavavy".
Valiny tamin'i Dorian
Luis Alverto dia hoy izy:
Satria milaza ianao fa mpampiasa fitiliana Debian ianao dia tiako ho toy ny birao manokana ny hevitrao momba ity kinova distro ity.
Valiny tamin'i Luis Alverto
Mahafinaritra raha vao apetrakao ny zava-drehetra 😉
Araky ny fitsapana elav debian tsy mampino !!
Tsara ho an'ny Kubuntu sy Xubuntu, amin'ireo roa ireo, Xubuntu no nanome ahy olana kely indrindra hatrizay, izany no antony anolorako tena rehefa misy te-hametraka 'buntu'.
Mampiasa bits Xubuntu 12.04 64 aho ary manidina izy, ny zavatra tsara indrindra nanandramako; fa raha mamorona, manaisotra serivisy tsy ilaina ary manampy programa isan-karazany.
Tsy fantatro fa notazonin'ny vondrom-piarahamonina Xubuntu. Tsara ve sa ratsy ?.
Izaho manokana dia misafidy distro tantanin'ny fiarahamonina toy izay an'ny orinasam-pandraharahana.
Azonao atao ve ny manoro hevitra ahy amin'ny forum forum Xubuntu?
Heveriko fa ny antony itiavanao ny fanapariahana notazomin'ny The Community, dia ireo ihany no mamaly ny fanontanianao raha tsara na ratsy, fa tsy hoe Xubuntu no mitazona azy.
Mpinamana be satria ny Linux no nampiasako roa (Kubuntu sy Xubuntu) ny marina dia afaka mahita ny mahasamihafa azy amin'ny fampisehoana ianao, maka teboka marobe amin'i Kubuntu i Xubuntu amin'ny fampisehoana, ankehitriny kosa misy milaza fa XFCE ratsy tarehy, lainga, inona no mitranga dia tsy maintsy fantatrao amboary ary ampifanaraho. Ankehitriny dia mahazo aina amin'ny Xubuntu 12.10 any am-piasana sy any an-trano aho. Ankehitriny dia mahatsapa ho mifandray bebe kokoa amin'ny Linux aho, lazaiko amin'izy ireo fa tamin'ny asako dia naharesy lahatra ny mpiara-miasa amiko hampiasa Linux (izay kinova inona no tsara kokoa amin'ny fitaovany) ary ps izao dia "MAIMAIMPOANA" isika rehetra.
Arahabaina aho noho ny asa lehibe "FromLinux", tehaka ho azy ireo.
BenPaz, tena tsara ny nitondranao ireo mpiara-miasa aminao hanakaiky an'ity tontolo ity, fa mba tena "MALALAKA" (foto-kevitra FSF) ry zareo, rehefa manoratra ianao dia tokony hieritreritra ny hiantso ny rafitra "GNU / Linux" fa tsy hoe Linux, raha tsy izany dia aleony "VOKAFY" (izay mangoraka kokoa ny hevitry ny Open Source)
Misaotra nanontany ahy hahaha ka hitako hoe: http://es.wikipedia.org/wiki/GNU
Raha azonao izany.
Ity lahatsoratra ity dia tsara ho ahy raha mieritreritra ny OS tokony hoentin'ny solosaina findainy.
Nampiasa Kubuntu 12.04 aho nandritra ny iray volana sy sasany ary tiako be izany, rehefa nandà ny KDE nandritra ny fotoana ela aho dia tsy nahita tsiro. Ny iray amin'ireo zavatra tsara indrindra ananany dia ny Dolphin, Okular ary Amarok, ary koa manintona tena manintona izy io.
Mifanohitra amin'izany kosa ny fanjifana RAM (sy angovo): 1.3 GB fotsiny ny fisokafan'ny Firefox sy Amarok (ary efa tsy nety nanao zavatra maromaro aho). Na dia mampiasa ny solosaina finday aza aho amin'ny ankapobeny ary tsy misy batterie, rehefa mampiasa an'io amin'ny bateria fotsiny aho dia hitako fa nihena ny fiainany ary tsy hitako amin'ny KDE ny fomba hahitako ny fotoana kasaina hametrahana azy (hitako ny isan-jato fa izaho koa liana amin'ny fotoana).
Etsy ankilany, hitako ny Xubuntu fa mandeha haingana kokoa io, ny fandrehitra azy dia mandany mihoatra ny 300 MB (eo amin'ny 600 MB raha manana Firefox sy Clementine aho) ary tsy ratsy tarehy izany. Ho fanampin'ireo programa gtk izay nampidirina tsara kokoa, mamela ahy hahita ny fotoana voatondro ho bateria (ary maharitra kokoa), tantiko tsara kokoa ny famirapiratan'ny efijery ary mikoriana tsy ho ela ny zava-drehetra. Ny lafy ratsy dia tsy mety amiko i Thunar ary tsy misy ny vokany mahery amin'ny KDE.
Fantatro fa sarotra izany nefa inona no hataonao? Kubuntu na Xubuntu amin'ny solosaina finday ary maninona?
Samsung 300VA4A io: Intel Core i3 ary RAM 4 GB. Ny fampiasako azy mafy indrindra dia ny fanovana sary sy fananganana pejy web.
Misaotra amin'ny fanampiana. Salama.
Namana Emanuel Manana solosaina finday manana ny mampiavaka azy aho ary ny marina dia nanapa-kevitra tao amin'ny Xubuntu aho, lazaiko aminao ny antony; (Mariho ity ny solosaina finday Toshiba i3 misy ram 4):
+ Fampihenana ambany kokoa ny fitadidiana ram sy processeur
+ Tsy mafana be.
+ Mazava kokoa, mandeha ny apps.
+ Ary ny marina dia rehefa mampiasa divay na CrossOver dia mivoatra tsara ny rindranasa sy ny lalao "Windows".
+ Momba ny fametrahana Thunar version 1.5.1 ity tsara ity.
+ Ankoatr'izay manana ny Ubuntu Software Center, izay ho ahy dia tena tsara.
——— Manantena aho fa afaka manapa-kevitra ianao.
Heveriko fa nahatonga ahy hahita tombony lehibe amin'ny Xubuntu ianao: mihena kely ny masinina. Mety tsy ho hita eo amin'ny birao izany fa amin'ny solosaina finday kosa dia manaitra ny saina.
Misaotra tamin'ny valiny. Fifamihinana.
Manana solosaina finday mitovy amin'izany aho, i3 miaraka amin'ny 4Gigas ... ary aleoko mitondra kde, satria manome ahy fampiasa izay ampiasaiko ary tsy manana xfce, ohatra, krunner izay nanjary nilaina tamiko tokoa, ny hetsika, ny vokany sasany, ny kioslaves ... ary saika ampiasaina Ny fitaovan'ny kde (dolphin, okular, kate, kmail, harona, yakuake) rehetra ary ny qt (vlc, clementine) ary ny gtk (libreoffice sy chromium) rehetra.
Izay no tiako momba ny KDE, manana programa marobe izay tena tsara. Manao ahoana ny bateria findainao? Mafana be ve ilay masinina?
Miaraka amin'i Xubuntu tsy haiko, tao amin'ny Virtual Box ihany aho no nanandrana azy ary toa tena mahomby sy kanto izy io, saingy miaraka amin'i Kubuntu dia mila manome anao tena marina aho. Io ny fizarana ampiasaiko ary miasa tsara kokoa isan'andro ny solosainako.
Fidirana mahaliana. Salama.
Ny marina dia, efa nanandrana aho roa ary tsy maintsy ekeko fa ny Kubuntu sy ny Xubuntu dia safidy tsara kokoa noho ny Ubuntu ... Nandany efa ho 2 taona niaraka tamin'ny Xubuntu aho ary io no iray amin'ireo distro tsara indrindra azoko, na dia satria mifototra amin'ny Ubuntu izay isaky ny dikanteny dia mandany loharano bebe kokoa ary feno bibikely kokoa dia tsy maivana tahaka ny tokony ho izy ... roa andro lasa izay dia nifindra tany Manjaro Linus XFCE aho ary izao dia fantatro hoe inona ny fitoniana, ny fahatsorana ary ny hafainganana. dia ... faly ihany ny ekipan'i Kubuntu sy Xubuntu ary manantena aho fa tsy hanao zavatra hafa izy ireo raha tsy mihatsara!
Ny distro voalohany nataoko tamin'ny linux dia ny kubuntu 5.04 ary ny marina dia nihatsara be raha oharina amin'ny xubuntu, nanandrana ny kinova 8.10 aho ary toa nitranga izany.
Noho ny zavatra nihatsarany dia tokony ho lehibe izy ireo saingy noho ny antony tsy mamporisika ny tenako hanandrana aho satria tsy manam-potoana ary indrindra amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny p ... ho seminera "Seminera informatika" (Seminera Microsoft Office) mila manana windows 7 amin'ny fizarazarana mandeha manahirana. Rehefa manam-potoana aho dia mety hanandrana ny livecd ihany satria tsy sahiko manova ny LM 13 miaraka amin'ny KDE amin'ny solosaina findaiko sy ny fitsapana ny debian ao amin'ny birao.
Tena gaga an'i Kubuntu aho, mandeha tsara! : NA
Ity misy fehezanteny iray rehefa nampiasa Kubuntu 12.04 😀 (niverina tany amin'ny distro tiako haha ​​aho izao)
Ankehitriny rehefa tsaroako ny zavatra tokana tsy azoko ovaina dia ny tao amin'ny Dolphin noho ny antony hafahafa hoy ny menio: fisie fa tsy fisie: O
Salama mpiserasera. Mampiasa Xubuntu 12.04 aho ary ny marina dia faly aho. Olom-baovao linux mikorontana aho fa tena milamina io distro io, gaga aho.
Ny hany fanontaniako apetraka aminao dia ny tokony havaozina ho 4.10? Misy fahasamihafana be ve sa tsara kokoa ny miandry taona vitsivitsy vao hivoaka ny fanovana lehibe?
Mora ve ny manavao sy mitahiry tsy ny sary sy ny fisie ihany, fa ny angon-drakitra tenimiafinao rehetra ao amin'ny Fieroks, Filezilla, ny fanao manokana ao amin'ny Gimp, sy ireo programa ampiasako?
Miala tsiny aho raha tena hadalàna ny fanontaniana, tena ratsy fanahy aho amin'izany, ary manararaotra manao veloma sy misaotra anao amin'ny asa fampahafantarana nataonao.
Eny, ho ahy dia misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny Xfce 4.8 sy Xfce 4.10. Ity farany dia manana singa voaangona indray avy eo am-boalohany, manana fanamboarana bibikely lehibe kokoa, mampiditra fampiasa vaovao ary maivana kokoa koa.
Misaotra anao! Naharesy lahatra ahy ianao! izao fotsiny mila fantariko ny tapany faharoa amin'ilay fanontaniana ... Horaisiko moramora ary hianarako miadana hitahiry sy hampita ny zava-drehetra amin'ny kinova vaovao (ho ahy izao dia aretina izany ka tsara kokoa ny maka mora)
Heveriko fa mendrika havaozina 🙂
Ary nah mihitsy, tsy tokony hiasa saina ianao amin'ny famoizana angona ... tsy tokony ho very ianao, raha mbola tsy mamorona endrika ianao dia tsy tokony ho very na inona na inona 😉
Miarahaba namana, ary aza manahy fa tsy hadalana ny fanontaniana 😀
Raha ny marina, tiako ny Xubuntu, ny fitoniana, ny hafainganana ary ny fahatsorana ambonin'ny zavatra rehetra.
Hiezaka aho tsy hanitatra be loatra, satria amin'ny fanehoan-kevitra momba ny Canonical, matetika aho dia mandinika filozofika antsasaky ny saina handresy lahatra ny tenako zavatra ... something
Hanombohana azy, amin'ny fiezahana ho kendrena, holazaiko fa Canonical dia arahabaina noho ny fanohanany ny Ubuntu. Ny firaisankina dia mety tsy ho an'ny rehetra, fa Ubuntu dia vita tsara.
Manaiky tanteraka aho fa Kubuntu dia distro tsara, na Precise na Quantal. Xubuntu 12.04 nampiasaiko nandritra ny 3 volana teo ho eo, fa ny 12.10 dia efa notsapaiko tamin'ny VirtualBox fotsiny. Kubuntu Precise dia toa tsy dia nilamina kokoa noho ny Quantal ...
Na izany aza, tiako ny GNOME Shell, izay no antony ampiasako azy io amin'ny Ubuntu. Tena tiako ny KDE, ny olana dia, iza no mahalala ny antony, mihinana toy ny 90% isaky ny core 2GHz aho, raha ny Fedora (sy ny OpenSUSE, heveriko) miaraka amin'ny GNOME Shell dia tsy mihoatra ny 20% ... Mbola koa mampiasa OpenSUSE miaraka amin'i KDE aho izao; Indraindray aho dia mila mamono ireo vokany kely indrindra mba tsy hiadana ny zava-drehetra, fa tsy misy na inona na inona tsy afaka mamaha ny fampiasana ny iray amin'ireo distro mafy orina indrindra ...
Mirary anao ho tsara vintana! 😉
Wow, vilany majika. Toa ny olana amin'izany ... "overload" dia ao amin'ny Firefox. Hafahafa fa tsy mitranga amiko izany ao amin'ny GNOME Shell: _
Angamba noho ny mpamily NVIDIA io? Ao amin'ny GNoME Shell dia tsy nametraka azy ireo aho.
fanontaniana elav, kubuntu sa debian test-kde?
Miankina amin'ny fahalalana anananao sy ny mahasarotiny anao amin'ny fandaminana zavatra 😀
Mampiasa ny Kubuntu 12.10 am-pahatsorana aho ary handeha tsara; Nampiasako azy nandritra ny herinandro ary nahaliana ahy izany: heveriko fa lasa Kubuntero XD aho
Tena mieritreritra aho fa ny KDE 4.9 (vao avy navaoziko tamin'ny SUSE) dia mahagaga ... Ao amin'ny 4.8 izay tonga tampoka dia tsy misy fomba hananana ny vokan'ny Blur ary iray hampihenana ireo varavarankely nohafanaina, aorian'ny fanavaozana, miaraka amin'ireo roa navadika, ny rafitra dia ho tia landy, na dia misy fampiharana GTK toy ny Firefox na XChat ...
Ny fahasamihafana eo amin'ny fampisehoana dia tena tsikaritra, na dia efa prehistorika aza ny solosaina finday dia ara-dalàna indraindray ny tsy hanajanako ny vokany mba tsy ho fatin'ny lag 😛
Kubuntu 12.10 dia distro tsara ihany koa, fa raha te hanandrana kely ianao dia manoro hevitra anao aho hanandrana ny OpenSUSE, ho an'ny maro dia ny hatsaran'ny KDE distro par izany, ary manana fitaovana fitantanana tena tsara toa ny YaST na Zypper 😛
Na izany aza dia nanandrana nametraka GNOME Shell aho ary tsy nisy, tsy hita ao amin'ny kdm 🙁 izany
Heiji989 dia hoy izy:
Salama tsara, vaovao aho amin'ity xubuntu ity ary nandefa asa tsy haiko hoe aiza no hanombohana aho…. Raha misy olona afaka manampy ahy (mijery azy aho, saingy ny teoria ihany no mivoaka) ny olana dia tsy maintsy alamiko anaty milina virtoaly izany rehetra izany ... Tena tiako ny fanampiana 🙂
Dhcpd.conf fisie namboarina:
• tamba-jotra 192.168.1.0 miaraka amin'ny mari-pahaizana manomboka amin'ny 192.168.1.30 ka hatramin'ny 192.168.1.100
• Fotoana fampanofana tsy misy fetrany ary ny fotoana fanofana max ataonao default
• Solosaina 2 miaraka amin'ny static Grant:
o Ilay voalohany dia hatao hoe router, ny @MAC dia foronina ary hanana IP: 192.168.1.254
o Ny faharoa dia hatao hoe mpanonta, ny @MAC koa ho foronina ary hanana ny IP: 192.168.1.253
• fisie db.zona1 miaraka amin'ireto firaketana ireto:
na nameservers 2 samihafa antsoina hoe ns1.iescaparrella.cat sy ns2.iescaparrella.cat
o masinera 1ererver antsoina hoe server.iescaparrella.cat
o A alias www ho an'ny mpizara
o alias ftp ho an'ny mpizara
o Solonanarana rahona ho an'ny mpizara
na solosaina mpampiasa 4 miaraka amin'ny anarana host1, host2, host3 ary host4
Valiny ho an'i Heiji989
Izany rehetra izany dia tokony hamboarina ao amin'ny xubuntu
Mampiasa ny KDE aho noho ny antony mahafinaritra, izaho dia iray amin'ireo izay tia manova ny birao sy ny windows ary mitady zavatra izay "mameno ahy" amin'ny fisehoan'ny solosaina (solosaina finday)
Tiako ny KDE ary nameno ahy izy io, mihoatra ny Unity, tsy nanandrana Xubuntu betsaka aho fa azoko antoka fa zavatra manana kalitao lehibe toy ny zavatra rehetra avy amin'ny Linux ...
Jhon Zamora dia hoy izy:
Amin'izao fotoana izao (2019, taona hanoratako ny hevitro), nametraka tao amin'ny Dualboot: Xubuntu 18.04 sy Windows 10 aho (satria nampiasaina betsaka teo amin'ny tontolon'ny akademika nidirako io), ho an'ny fitantanana ireo tetik'asa manokana sy andrana dia mampiasa Xubuntu be dia be aho. Tsy manenina aho amin'ny filokana sy ny fanentanana ny fanovana amin'ny fikatsahana rindrambaiko maimaimpoana.
Valiny tamin'i Jhon Zamora
Fetsy, fahalianana ary fahafinaretana ao amin'ny Terminal.